တရုတ် ၊ ရုရှား ၊ ပါကစ္စတန် ၊ အီရန်နိုင်ငံတို့က အာဖဂန်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာ - Xinhua News Agency
ဒူရှန်ဘီ ၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ် ၊ ရုရှား ၊ ပါကစ္စတန် နှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့မှ အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူများသည် အာဖဂန်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်ရန် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ ၊ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov ၊ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Shah Mahmood Qureshi နှင့် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Seyed Rasoul Mousavi ၏ လက်ထောက်တို့က တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ မြို့တော် ဒူရှန်ဘီမြို့၌ အာဖဂန်အရေး အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဝမ်ရိက နိုင်ငံ လေးနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းရန် ၊ အသံများတစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းဖြစ်စေရန် ၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုများ အားထုတ်ကြိုးပမ်းရန် နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အခြေအနေတည်ငြိမ်ရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများက အာဖဂန်အစိုးရသစ်သည် အားလုံးပါဝင်ရေး ၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေး ဖြစ်စေရန် မျှော်လင့်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေး ၎င်းက အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
DUSHANBE, Sept. 16 (Xinhua) — Senior officials from China, Russia, Pakistan and Iran agreed on Thursday to step up communication and coordination on the Afghan issue.
Countries in the region expect the new Afghan government to be inclusive, anti-terrorist, and friendly to neighbors, he stressed. Enditem
Photo – A member of Taliban stands guard atasecurity checkpoint in Kandahar city, Afghanistan, Sept. 11, 2021. (Photo by Sanaullah Seiam/Xinhua)